Amazon Versus izao tontolo izao! | Martech Zone
Amazon Versus izao tontolo izao!
Alarobia, Desambra 21, 2011 Alakamisy, Jona 18, 2015 Andrew Davis
Amazon dia mijoro ho iray amin'ireo loharanom-pahalalana matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao. Miaraka amin'ireo mpanjifa sy mpankafy matimaty an-tapitrisany maro, tsy ny mpivarotra ambongadiny hafa ihany no nanohitra an'io sy ny ivelan'ny tranonkala fa ny fantsom-barotra amin'ny Internet manontolo.
Ny vokatra vaovaon'i Amazon, ny Kindle Fire, dia nandray fitsikerana henjana tamin'ny herinandro lasa. Na eo aza izany dia toa mampivarahontsana ihany ny varotra, miaraka amin'ny mihoatra noho ny 1 tapitrisa Kindle (anisan'izany ny Kindle Fire) amidy isan-kerinandro amin'ny herinandro fahatelo misesy.
Amin'ny maha loharanom-pifamoivoizana be dia be azy, Amazon dia sarobidy tsy ho an'ny mpanjifa ihany fa ho an'ireo mpivarotra sy mpanonta an'arivony izay mitanisa ny vokariny eny an-tsena sy amin'ny alàlan'ny programa marketing PPC an'i Amazon, Amazon Product Ads.
Zahao ny sary (A Paikadin'ny CPC Voalohany!) Hijerena ny ady amin'i Amazon amin'ny mpifaninana aminy ho an'ny tsena lehibe kokoa amin'ny tontolon'ny varotra sy serivisy.
Tags: Amazonpaikady cpcecommerce
Sarany ara-tantara amin'ny telefaona finday
Ecosystem Marketing anaty
Dec 21, 2011 ao amin'ny 10: PM PM
Misaotra betsaka anao nizara ireo. Betsaka ny loharano tsara eto. Azoko antoka fa hitsidika ity toerana ity indray aho atsy ho atsy.